Ukukhangisa nokukhangisa Psychology Infographic
NgeSonto, ngoJulayi 17, i-2011 NgoLwesine, ngo-Okthoba 27, 2011 Douglas Karr
Le yi-infographic enhle evela ku-BuySellAds, ebizwa I-Sneaky Psychology Yokukhangisa. Okunye kwalokhu akukona nje ukukhangisa, kubuye kube isu lokukhangisa lomkhiqizo jikelele. Ngijwayele ukubheka ukukhangisa njengomcimbi… noma hook.. kepha ukumaketha konke ukuhlela nokuhlela okuholela ekwakhiweni kokukhangisa.
Ngamunye wethu ubhekene nokuvezwa komkhiqizo okungu-3,000 kuya ku-10,000 nsuku zonke ngezikhangiso ze-TV, amabhodi okukhangisa angaphandle, amabhanela ewebhusayithi, ngisho nezikibha zomakhelwane noma izinkomishi zekhofi ezisebenza nabo. Ngenxa yokuthi sigcwele izikhangiso, abathengisi benza ucwaningo lwakamuva lwengqondo futhi basebenzise izindlela ezahlukahlukene zokubamba ukunakekela kwethu nokuzuza ukuzethemba kubathengi bethu.
Ngabe ucabanga ukuthi lokhu kuyabheda? Noma ingabe kudlala nje kulokho sonke esikufunayo? Sifuna ukuba nobuciko ngokwengeziwe… uma ukuthenga i-Apple kusisiza ukuthi sikholwe ukuthi siyikho, ingabe kubi kangako? Futhi, ngesitayela esiphakeme se-Apple sehadiwe labo - bebengeke yini bathenge i-Apple ngaphezulu, noma kunjalo? Ngakho-ke… uma ubheka emuva… ingabe abasebenzisi be-Apple banobuciko obuthe xaxa? Ngicabanga ukuthi bangaba njalo!
Ngicabanga ukuthi i-Apple inokukhangisa okuhle kakhulu kwezobuchwepheshe emhlabeni. Imikhiqizo yabo ayiyona ehamba phambili kuzo zonke izigaba okwamanje ukuthi i-Apple logo iye yahlanjululwa yaba yizigidi futhi ngokombono wami ingumkhiqizo wezobuchwepheshe ohamba phambili emhlabeni okwamanje.
Ukufakwa uphawu kwe-Android (nge-HTC kanye nama-clones) sekuqala ukuba nomphumela ofanayo emakethe ye-Phone OS futhi i-Samsung / Sony inokubeka uphawu okuhlakaniphile futhi kodwa ayibonakali iphumelela emakethe yase-US kepha inamandla kakhulu e-Asia.
Izigidi zabafana be-Apple fan zisho ukuthi ama-Social Media airwaves agcwele abantu abasekela lo mkhiqizo futhi noma nini lapho i-Apple inephutha lomkhiqizo basheshe bagxume bavikele i-Apple kuze kube yilapho i-Apple ixazulula inkinga (Isib. Inkinga ye-antenna yokuqala nge-iphone4)
Iningi labantu libonakala lingenandaba nhlobo nokuthi isimo semidiya nezemfundo sikuthinta kanjani ukuziphatha kwabo. Ngenhlanhla ayisebenzi kuwo wonke umuntu. Sidinga ukuqonda ukuthi yini egqugquzela abathengi abangaba khona ukuthi bazuze amaklayenti ethu; kodwa-ke, izinkampani eziningi zikuthathe kakhulu lokhu ngokukhangisa okusobala ngokocansi.
Ukuthi asiqapheli kangakanani kungabonakala ngendlela esikhonjiswa ngayo yizinkampani eziningi njengezimbungulu noma 'izinsiza'. Kunentengiso yezimoto esezingeni eliphezulu okwamanje esebenza kuHulu ekhombisa zonke izinhlobo zabantu ezihlezi emgwaqweni ziyipenda ngamabhulashi amancane noma zihlanza noma zigibela emgwaqweni ukuze zicijise izinyoni izicathulo. Zombili lezi zinto ziveza ukuthi lezi zinkampani zicabangani ngathi: izimbungulu noma izigqila.
Ngiyajabula ukuthi le infographic isho amalogo. Ngigqugquzela abantu ukuthi banake uphawu lwezimpawu, ekukhangiseni nasekusakazweni kwabezindaba. I-YouTube yindawo enhle kakhulu yokuthola amavidiyo asenza sonke sazi ukuthi ama-logo asho ukuthini. Zama usesho lwezimpawu zelogo.